Iiarhente ziyayidinga le Ncwadi kwitafile yekofu yazo | Martech Zone
Iiarhente ziyayidinga le Ncwadi kwitafile zekofu
NgoLwesine, uJuni 18, 2009 NgoLwesine, uJuni 18, 2009 Douglas Karr
Kwiminyaka emininzi eyadlulayo ndaya kumphathi wam, ngento endandiyicinga, yayiyimbono engakholelekiyo yokunyusa intengiso yegaraji. Yakha isicelo esikwi-Intanethi apho umntu obhalisileyo anokufumana ikhaya lakhe kwaye acwangcise usuku lokutyelelwa kwegaraji. Phakathi, abathengisi banokubeka isigqebhezana okanye ezimbini kwisidlo sasemini okanye ikofu.
Indlela ecwangcisiweyo iya kubonelela ngegaraji yokuthengisa i-aficionado ixesha elininzi kunye nexesha elincinci lokuqhuba. Mhlawumbi banokucoca ngegama elingundoqo, umgama, ixesha, njl. Umphathi wam ucinga ukuba umbono uvumelekile kwaye ndahamba ndafumana iikowuti (phantsi kwe- $ 10k ngelo xesha).
Yaliwe ngenxa yenkcitho.
Kwakuyiyo Umbono obuleweyo kwaye yandikhathaza iminyaka emi-5 okanye emi-6 ibijikeleza entloko. Umhla wokwakhiwa kwawo, ndiza kulila iinyembezi ndisazi ukuba bendinokuba yinxalenye yento ekhethekileyo (kunye nezinye izinto ezenziwayo). Namhlanje ndiyancwina kancinci njengoko ekugqibeleni kubhaliwe kwincwadi entsha…
Ndifumene incwadi enoqweqwe oluqinileyo (eyakhiwe nge acatshulweyo) namhlanje eposini kwaye iyamangalisa ngokwenene. Ubugcisa obujikeleze uyilo lwencwadi, umgangatho wopapasho, kunye nemibono ngaphakathi kwincwadi yenza ukuba ibe yenye yezona ncwadi zixabisekileyo endakha ndazibeka kwitafile yam yekofu. Yonke iarhente kufuneka ibe nekopi yayo!
Upapasho olusemthethweni ku Iingcamango ezibuleweyo kule veki kwaye ukuvota kuvuliwe! Ndiyayixabisa eyakho uvotele iMephu yokuThengisa iGaraji! Kwakulilungelo elikhulu ukukhethwa kwizimvo ezingama-50 zokugqibela zencwadi- ndikwiqela leetalente zokuyila ezimangalisayo.
Guqula iInjini yakho yokuKhangela kwi-Safari kwiNgwe
Imfihlo ye-SEM: Iziphumo zikaGoogle ziRigged
Juni 18, 2009 ngo-11: 54 PM
Kuye kwafuneka ndivotele iMaphu yakho yoThengiso lweGarage…ihlekisa kakhulu!
Juni 20, 2009 ngo-3: 04 PM
Yhooo! Enkosi ngevoti!